China Soft PVC Bottle evulekileyo mveliso kunye nabenzi | SJJ
I-Bottle ye-PVC evulekileyo yeBhotile ngokwesiqhelo yenziwe ngesembozo se-PVC kunye nokuvulwa kwesinyithi. Icandelo le-PVC lenziwe ngezinto eziphathekayo ze-PVC, ngobukhulu obuhlukeneyo, iimilo ezahlukeneyo ngokufa. I-2D okanye i-3D ayinakwenziwa kwicala elinye kuphela, kodwa nakumacala omabini. Umsebenzi ogqibeleleyo, izitayile zenoveli kunye nezinto ezingezizo ityhefu ziyafumaneka nangaliphi na ixesha, ukwenza iilogo okanye izilogeni ezishicilelweyo ngaphezulu.
I-Soft PVC Bottle Openers zisetyenziswe ngamehlo onke amaxesha njengezinto zokwazisa, izikhumbuzo okanye izipho. Zithandwa kwimivalo, kwiintsapho, kwizikolo, kwisidlo, ukunyuselwa, izipho, iivenkile, izikhumbuzo kunye nokunye. I-Soft PVC Bottle Openers inokufunxwa kwifriji ngaphandle ngezihlanganisi zemagnethi, okanye uze nayo usebenzisa imisesane yesitshixo, okanye imixokelelwane ephambili iziqhotyoshelweyo. Izinto zokusingqongileyo zinokudlula e-USA okanye kuvavanyo lwaseYurophu.
Izixhobo: I-PVC + yensimbi ethambileyo
Iimpawu: I-Die Struck 2D okanye i-3D kumacala angatshatanga okanye aphindwe kabini
Imibala: Yonke imibala yePMS iyafumaneka, imibala emininzi
Ukhetho oluqhelekileyo lokuNcamathisela: iimagnethi ezinamandla, iimagnethi ezithambileyo, isangqa esisisitshixo, amakhonkco eMetro, imixokelelwane ephambili, imixokelelwane yeBhola njl.
Egqithileyo Izivalo eziphambili zePVC
Okulandelayo: Iifayile zePVC zePhepha
Isitshixo seBhotile sokuvula
Isitshixo seBhotile evulekileyo
Ukuvula ibhotile ngokwezifiso
Iibhotile ezenziwe ngokwezifiso
PVC Bottle sokuvula
i-pvc yebhotile evulekileyo
Keychains Bottle evula
Umnwe Ring Bottle sokuvula